कोठा दिनुअघि घरबेटी राख्छन् महिनावारी बार्नुपर्ने सर्त! :: Setopati
कोठा दिनुअघि घरबेटी राख्छन् महिनावारी बार्नुपर्ने सर्त! ‘महिनावारी हुँदा महिलालाई सहरमा पनि कहर रहेछ’
सविता बुढा धनगढी, असोज ११
धनगढी सहरको हवाई दृश्य। तस्बिर सौजन्य: सुदूर डेली।
२३ वर्षीया माया (नाम परिवर्तन) थारूको परिवारमा महिनावारी हुनु एकदम स्वभाविक कुरा हो: यसलाई न पाप मानिन्छ, न बारिन्छ।
'घर छोडेर आइयो यहाँ आएपछि डेरामा बस्न परिहाल्यो। घरबेटीले महिनावारी बार्न पर्ने सर्त राखेका छन्। महिनाको पाँच दिन अछुत बनाउँछन्, बेइज्जत गर्छन्,' उनले भनिन्।
'गाउँमा महिनावारी हुनु अछुत हुनु थियो। पाप मान्थे,भगवान् रिसाउँछन् भनेर छुन दिन्नथे। निकै गाह्रो हुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'गाउँ हुँदा सहरमा त यस्तो कहर हुन्नहोला जस्तो लाग्थ्यो। पढे-लेखेका मान्छे हुने समाज पनि उस्तै रैछ। घरमा त अरूले पकाएर दिन्थे, खानसम्म पाइन्थ्यो। यहाँ पकाएर दिने मान्छे पनि छैन पकाउन पनि पाइन्न कस्तो गाह्रो।'
‘धारा, बाथरूम छुन पाइन्न भन्ने डरले नभनौं जस्तो लाग्छ, फेरि घरबेटीले थाहा पाए त मारिहाल्छन्, त्यही भएर आफैं छुँदैनौं,' उनले भनिन्।
शिक्षित र चेतनशील मानिसहरू बस्ने भनिएको सहरमा समेत महिलालाई महिनावारीका बेला 'अछुत' बनाइनु लज्जाजनक कुरा भएको यो क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
‘यस्ता कुरालाई बाहिर ल्याएर कानुनी उपचारमा जानु पर्ने हो,' उनले भनिन्, 'हाम्रो कानुनले महिनावारीको नाममा कुनै पनि विभेद गरे फौजदारी अपराध मान्छ।'
'महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नु वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन,' उक्त उपदफामा भनिएको छ।
'कानुन लागु भएको तीन वर्ष पुगिसक्दासमेत यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन, जसले गर्दा महिनावारी भएकी महिलामाथि मानिसहरूले नहिच्किचाई अपमान गर्छन्,' अधिकारकर्मी घिमिरेले भनिन्।
‘यस्तो विभेद सहनु पर्दा महिलालाई गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण हामीले पटक-पटक भनेका छौं, प्रदेशमा महिला कानून बनाउनु पर्छ। यसबारे गृह मन्त्रीज्युसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ११, २०७८, १५:५३:००